मिर्गौला समस्या, डायलोसिस र बचावट
डा. सुमनराज ताम्राकार बुधवार, चैत २, २०७३ 4895 पटक पढिएको
के हो मिर्गौला ?
मानव शरीरको कम्मरको दुवैतिर ठूलो सिमी आकारका मिर्गाैलाहरू हुन्छन् । प्रत्येक मिर्गौला करिब १२.६.३ सेमिका हुन्छन् । दायाँतर्फबाट मिर्गाैला थोरै तलतिर हुन्छ । २४ घन्टामा मिर्गौलाले करिब एक सय ८० लिटर रगत (तरल पदार्थ) मा रहेको विकार वस्तु (हानिकारक र रासायानिक पदार्थ) फिल्टर गरेर फेरि शरीरमा फर्काउँछ । यस प्रक्रियामा स्वस्थ्य मानिसको शरीरमा दैनिक करिब डेढ लिटर पिसाब निर्माण हुन्छ । यस हिसाबले ६० देखि ७० मिलि पिसाब प्रतिघन्टा बन्नु पर्दछ । तर मिर्गौलामा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा शरीरको विकार वस्तु पिसाबको माध्यमबाट बाहिर फ्याँक्न कम्तीमा ३० मिलि पिसाब प्रतिघन्टा बन्नु आवश्यक छ ।
मिर्गौलाले ८५ देखि ९० प्रतिशतसम्म कार्य गर्न छोडेपछि शरीरमा विकारयुक्त रासायानिक वस्तुहरू थुप्रिन्छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा मेसिनको सहायताले विकारसँगै अनावश्यक लवण र अतिरिक्त पानी शरीरबाट बाहिर फ्याँक्ने प्रक्रियालाई डायलोसिस भनिन्छ । शरीरमा विकार वस्तु थुप्रिएको मात्रा र थुप्रिने अवधि हेरेर पटकपटक डायलोसिस गराउनुपर्ने हुन्छ । समग्रमा मिर्गौला प्रत्यारोपण नगरिएसम्म छिटोछिटो डायलोसिस गराउँदै जानुपर्ने अवस्था आउँछ ।
नेपालमा करिब २७ लाख नेपालीमा मिर्गौलासम्बन्धी समस्या छ । त्यसमध्ये २७ हजारमा अति गम्भीर खालको समस्या र बर्सेनि २७ सय जनाको मिर्गौलाले पूर्ण रूपमा काम गर्न छाड्ने अनुमान छ । यसरी मिर्गौला फेल भयो भने यसले रगत सफा पार्न सक्दैन र रगतमा भएको विकार क्रियटिनको मात्रा बढ्छ । सामान्यतयाः रगतमा क्रियटिनको मात्रा १.२ भन्दा कम हुनु पर्दछ । कुनै पनि बेला क्रियटिनको मात्रा बढेको छ भने यो स्थायी वा अस्थायी कुन प्रकारले बढेको हो थाहा पाउनु पर्दछ । अस्पताल तथा क्लिनिकमा ५०-६० रुपैयाँले क्रियटिनको मात्रा जाँच्न सकिन्छ । ज्वरो अथवा कुनै औषधि सेवन गरिरहँदा रगतमा क्रियटिनको मात्रा अस्थायी तवरले बढ्न सक्छ ।
मिर्गौला तथा पिसाब नलीमा हुने पटक पटकको संक्रमण, मिर्गौलाकै सुजन (नेफ्राइटिस), मिर्गौलामा पत्थरी, मिर्गौलामा पानीको फोका (सिस्ट) बन्ने समस्या, मिर्गौलाकै वंशानुगत समस्या तथा मिर्र्गौलाको ट्युमर (क्यान्सर) ले पनि मिर्गौलाको खराबी हुने भए पनि मिर्गौलाभित्रको नेफ्रोनको सुजन, लामो समयसम्मको मधुमेह (सुगर), उच्च रक्तचाप (हाई ब्लडप्रेसर) तथा वंशाणुगत कारणले स्थायी प्रकारको मिर्गौलाको खराबी हुन सक्छ ।
नेपालमा करिब २७ लाख नेपालीमा मिर्गौलासम्बन्धी समस्या छ । त्यसमध्ये २७ हजारमा अति गम्भीर खालको समस्या र बर्सेनि २७ सय जनाको मिर्गौलाले पूर्ण रूपमा काम गर्न छाड्ने अनुमान छ ।
मिर्गौला रोगका लक्षणहरू सुरुमा नदेखिए पनि माथि उल्लेखित स्वास्थ्य समस्याहरूको पृष्ठभूमिमा खुट्टा तथा आँखाको डिल सुन्निने, थकाइ लाग्ने, खान मन नलाग्ने, पिसाब छिनछिनमा लाग्ने भएमा मिर्गौला फेल खाएको हुन सक्छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण निकै खर्चिलो उपचार हो । त्यसैले पनि सुरुमा जो कोहीले आँटदैनन् र सुरुमा डायलोसिसकै सहारामा पर्दछन् । हाल नेपालभरिकै क्षेत्रीयस्तरसम्मका अस्पतालहरूमा डायलोसिसको सुविधा छ ।
करिब ८० प्रतिशत मिर्गौला रोगीले एक पटक पनि डायलोसिस गर्न सक्ने हुँदैन अर्थात् गराएका हुँदैनन् । नेपालमा हाल करिब पाँच सय जनाले डायलोसिस गराइरहेका छन् । त्यसमाथि संक्रमितलाई प्रयोग गरिसकेका तर राम्ररी निर्मलीकृत नगरिएका डायलोसिस मेसिनका कारण बिरामीले थप समस्या बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । डायलोसिस गराइरहेकाहरू तथा तिनका परिवारजन विस्तारै आजित हुन थाल्छन् र घरखेत बेचेर वा ऋण काढेर भए पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नतर्फ लाग्छन् ।
चिकित्सा विज्ञानमा भएको प्रगतिअनुसार मुटु, कलेजो, फोक्सो, मिर्गौलालगायतका मानव अंग प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक गर्ने गरिए पनि नेपालमा भने मिर्गौलामात्र प्रत्यारोपण गर्ने गरेको छ । नेपालमा सीमित सुविधाका कारण मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अझै कम्तीमा भारत जानुपर्ने व्यवस्था छ । शरीरका कुनै पनि अंग प्रत्यारोपणका क्रममा लिने र दिनेबीच रगत समूहलगायतका अन्य कतिपय तत्वहरू मिल्नु पर्दछ ।
नियमित व्यायाम गर्ने, सुगरका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राख्ने, नियमित प्रेसर नाप्ने, उच्च रक्तचापका बिरामीले प्रेसर नियन्त्रणमा राख्ने, धूमपान नगर्ने, जथाभावी पेनकिलर औषधि नखाने, दिनहुँ प्रशस्त मात्रामा पानी (कम्तीमा एक लिटर) पिउने गरेमा मिर्गौलाको रोगबाट बच्न सकिन्छ । योगा वा आयुर्वेदका उपचारतर्फ लाग्ने हो भने चिकित्सकको सल्लाह लिएर मात्र औषधि छोड्नु पर्दछ ।
मधुमेह र उच्च रक्तचापको कारण मिर्गौला बिग्रिनेभन्दा सुगर र प्रेसरको औषधि जिन्दगीभर खानुपर्नेमा बढ्ता पिरलो छ प्रभावित व्यक्तिलाई । पानी पिउने र व्यायाम गर्ने कार्य पनि गरिँदैन । मानव शरीरमा दुइटा मिर्गौला हुन्छन् । यदि एउटा मिर्गौलाले पुग्दो हो त प्रकृति (सृष्टिकर्ता) ले सुरुदेखि एउटै मिर्गौलामात्र राखिदिन्थ्यो होला । छोटकरीमा दुईटा मिर्गौलाको काम एउटा मिर्गौलाले गर्नु परेपछि अधिक भार त पर्छ नै । शरीरमा दैनिक रूपमा यति धेरै विकार तत्ववहरू बन्छ कि यी खराब तत्ववहरू फाल्न दुइटै मिर्गौला चाहिन्छ नै तर हुँदै भएन भने अलग कुरा हो । यो त हामीले कहिलेकाहीँ आधा पेट खाएर भए पनि रात कटाए जस्तै हो ।
मधेसमा भाइटीकाको रौनक (फोटोफिचर) 5170
शुभसाइतमा राष्ट्रपतिबाट भाइ डेगेन्द्र पाण्डेलाई टीका प्रदान 7476
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले साइत भन्दा एक घण्टा अगाडि नै टीका लगाए 17853
प्रधानमन्त्री देउवाले उत्तम साइतमै टीका लगाए 3673